118% gbara ọgwụ Gibraltar kagburu ekeresimesi n'ihi mmụba COVID-19 ọhụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ UK na -agbasa » 118% gbara ọgwụ Gibraltar kagburu ekeresimesi n'ihi mmụba COVID-19 ọhụrụ
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Entertainment • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa
118% gbara ọgwụ Gibraltar kagburu ekeresimesi n'ihi mmụba COVID-19 ọhụrụ.
Ihe karịrị 118% nke ndị Gibraltar gbazere ọgwụ mgbochi megide Covid-19, yana ọnụ ọgụgụ a gafere 100% n'ihi ọgwụ enyere ndị Spen na-agafe ókèala iji rụọ ọrụ ma ọ bụ gaa na mpaghara ahụ kwa ụbọchị.
Onu ogugu ndi okenye Gibraltar agbaala ọgwụ mgbochi nke ọma kemgbe Maachị, 2021.
A ka na-achọ ihe mkpuchi n'ụlọ ahịa yana n'ụgbọ njem ọha na Gibraltar.
N'otu aka ahụ, mba ndị nwere ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa akọpụtakwala mmụba na ọrịa Covid-19 n'oge na-adịbeghị anya.
Ndị ọrụ gọọmentị Gibraltar kwupụtara na akagbuola emume ekeresimesi niile, nnabata gọọmentị na nnọkọ ndị yiri ya.
A dụrụ ndị ọha na eze ọdụ ka ha zere mmemme ọha na eze maka izu anọ na-abịa. Maka mmemme otu niile, a na-atụ aro oghere dị n'èzí karịa nke ime ụlọ, imetụ aka na ịmakụ adịghị mma, a na-adụ ọdụ iyi ihe mkpuchi.
A gbara ndị Gibraltar niile tozuru oke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, mana n'agbanyeghị mmụba n'okwu COVID-19, Gibraltar Ndị isi anaghị ewere ohere ọ bụla na mmemme oke ekeresimesi.
“Mmụba dị egwu nke ọnụọgụ ndị mmadụ na-anwale ihe dị mma maka COVID-19 n'ụbọchị ndị na-adịbeghị anya bụ ihe ncheta siri ike na nje a ka na-ewu ewu n'obodo anyị yana ọ bụ ọrụ dịịrị anyị niile ịkpachara anya iji chebe onwe anyị. ndị anyị hụrụ n'anya, "Minista Ahụike Samantha Sacramento kwuru.
Gibraltar, Obere Territory Overseas nke Britain na-ekerịta oke ala Spain, ahụla nkezi nke ikpe 56 COVID-19 kwa ụbọchị n'ime ụbọchị asaa gara aga, site na ihe na-erughị 10 kwa ụbọchị na Septemba. Mmụba nke ikpe, nke gọọmentị kọwara dị ka 'mgbapụta,' na-abịa n'agbanyeghị Gibraltar nwere ọnụ ọgụgụ ịgba ọgwụ mgbochi kachasị elu n'ụwa.
Ihe karịrị 118% nke ndị Gibraltar gbazere ọgwụ mgbochi megide COVID-19, yana ọnụ ọgụgụ a gafere 100% n'ihi ọgwụ enyere ndị Spain na-agafe ókèala iji rụọ ọrụ ma ọ bụ gaa na mpaghara ahụ kwa ụbọchị. Agbanyela ndị okenye niile nke Gibraltar ọgwụ mgbochi kemgbe March, a ka na-achọkwa ihe mkpuchi n'ụlọ ahịa na n'ụgbọ njem ọha.
Gibraltar na-enye ndị gafere afọ 40, ndị ọrụ ahụike na ndị otu 'adịghị ike,' na inye ụmụaka nọ n'agbata afọ ise na 12 ọgwụ mgbochi.
N'otu aka ahụ mba ndị nwere ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa akọpụtakwala mmụba na ọrịa COVID-19 n'oge na-adịbeghị anya.
Na Singapore, ebe 94% nke ndị tozuru etozu gbabara, ikpe na ọnwụ rịrị elu na njedebe nke Ọktọba, ma gbadata ntakịrị.
Na Ireland, ebe ihe dị ka 92% nke ndị okenye gbachara ọgwụ mgbochi, ikpe COVID-19 na ọnwụ sitere na nje a amụbaala okpukpu abụọ kemgbe August.
Deb Damaskọs ekwu, sị:
Ọnwa Iri na Abụọ 7, 2021 na 11:22
Kedu ka obodo nke karịrị 100% vaxed nwere ọtụtụ n'ime ndị bi na ya si bute nje a? Ọ nwere ike ịbụ na ọgwụ mgbochi ahụ adịghị mma? Ọ nwere ike ịbụ na ikwe ka ọrịa bute ọrịa, iji usoro ọgwụgwọ ọgwụgwọ egosipụtara nke ọma bụ ụzọ ka mma iji nweta mgbochi siri ike ogologo ndụ? Ọ nwere ike ịbụ na ịsa ahụ n'oge ọrịa na-efe efe emeela ka nje virus na-akpa ike karị? Ụwa teta.
Nnọọ ekwu, sị:
November 23, 2021 na 20: 22
Ọ dịghị onye na-akagbu ekeresimesi na gibraltar. Ọ bụ fakenews dara ogbi. Onye ozi ahụ kwuru ya n’ezie n’akụkọ ọhụrụ n’ihi na ọ hụrụ ihe ndị ogbi kwuru banyere ya
BOOSTER-ul FUNCȚIONEAZĂ DE MINUNE DAR NUMAI DUPĂ CE FACI VREO 7: Gibraltarul vaccinat în proporție de 118% anulează Crăciunul din cauza unui nou focar de COVID-19 – Mucenicul's Blog ekwu, sị:
November 17, 2021 na 14: 27